I-Kulraya Villas - Izindlu Zokuzilibazisa Ezihlinzekwa Ngamachibi - I-Airbnb
I-Kulraya Villas - Izindlu Zokuzilibazisa Ezihlinzekwa Ngamachibi
Ko Lanta, Krabi, i-Thailand
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ian
Ukuthuthukiswa okukhethekile kwezindlu ezi-2 ze-Serviced pool villas ezitholakala esiqhingini esishisayo sase-Koh Lanta esisesifundazweni saseKrabi eThailand. Ama-villas angasese echibini azungezwe ihlathi lemvula elimsulwa elinokubukwa kwe-panoramic phezu koLwandle i-Andaman futhi aklanyelwe ukukunikeza ubumfihlo, ukunethezeka nokuthula.
Abasebenzi bethu bazonakekela zonke izidingo zakho ukuze baqinisekise ukuthi uneholide eliphumulele, elinokuthula nelikhumbulekayo. Ukuhamba imizuzu eyi-10 noma imizuzu emi-3 ukuya e-Klong Dao Beach naseLong Beach
Ama-villas alala abantu abangafika kwabangu-5 abanamakamelo okulala angu-2, amagumbi okugeza angu-2, indawo yokuphumula enepulani evulekile nendawo yasekhishini, ichibi langasese kanye nethala elikhulu elinezinhlelo zomculo zangaphakathi nangaphandle.
Ama-villas angu-2 ayimfihlo ukusuka komunye nomunye futhi afana ncamashi ekwakhiweni nasefenisha enamagumbi okulala amakhulu ama-2, amagumbi okugezela angu-2 kanye namachibi okubhukuda angenayo i-infinity. Idizayinelwe kahle futhi ifakwe ngezindawo ezinkulu zokuhlala zangaphandle kanye nezindawo zethala lamachibi ezinokubukwa kwe-panoramic phezu koLwandle i-Andaman ezizuza ekushoneni kwelanga okumangalisayo.
Ama-villas anekhishi elihlome ngokuphelele, amagumbi okugeza amatshe e-travertine, i-TV yesikrini esiyisicaba, iDVD, nezinhlelo zomculo.
Igumbi lokulala lesibili lingahlelwa njengemibhede emikhulu ephindwe kabili noma emi-3 uma kudingeka
1 umbhede omkhulu, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-3
Itholakala ogwini olusentshonalanga yegquma emngceleni wehlathi lemvula elimsulwa, ama-villas anokubukwa okungu-180 degree phezu koLwandle i-Andaman.
Sinomphathi we-Villa otholakalayo ukuze ahlele uhambo, izinkambo, amatekisi nama-oda okudla e-Vila. I-Villa Manager itholakala ngomakhalekhukhwini esizokunikeza wona ngesikhathi uhlala.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$289.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ko Lanta namaphethelo